Michael Jackson (Rest in Peace) | အိုးဘို
Michael Jackson (Rest in Peace)
Posted: June 27, 2009 in News, Review
Tags: Michael Jackson is dead
ကမ္ဘာကျော် ဂန္တ၀င်ပေါ့ပ် ဘုရင်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြတဲ့ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ဟာ ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့ကLosangles မြို့မှာ နုလုံးရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ် ။ အသက် ၅၀ ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ မိုက်ကယ်လ ဟာအသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ ဆိုးရွားလာတာကြောင့် ည ၁၂ နာရီ ၂၀မိနစ်အချိန်ခန့်မှာ အရေးပေါ် ၉၁၁ ကိုခေါ်ဆိုလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်ဟာ LA မှာရှိတဲ့ Humbly Hills ရှိသူရဲ့နေအိမ်ကို
အမြန်ရောက်ရှိလာကာ ညတွင်းချင်းဆေးရုံကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူချစ်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးကိုသူဟာထားခဲ့ပြီး ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ် ။ ဒီသတင်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့ သူတိုင်းခဏတာမင်သက် အံ့သြသွားရလောက်အောင်ဒီကမ္ဘာကြီးအပေါ် သူရဲ့ သြဇာလွှမ်းခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကိုချစ်ခင်လေးစားကြပါတယ် ။ မိုက်ကယ်လ ဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံး
အချိန်တွေမှာ လူထုရှေ့ကပျောက်ကွယ်နေခဲ့ပါတယ် ။ ပြသနာပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်ကြားမှာ ရုန်းကန်ရင်း သူဟာနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါပြီ။
သူမသေခင်မှာလူတွေ သူ့အကြောင်းဘယ်လိုတွေပြောဆိုနေကြပေမယ့်သူဟာ ဂီတပိုင်းမှာ ဘုရင်တပါးလိုသြဇာရှိခဲ့တာ ငြင်းလို့မရအောင် ပါပဲ ။ဒီနေ့ ChrisBrown တို့ Neyo တို့တွေရဲ့ ဂီတတွေမှာထိ မိုက်ကယ်လရဲ့ ဟန်တွေ၊လှုပ်ရှားပုံတွေ ပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်။ လူမဲကမ္ဘာမှာ ထိပ်ဆုံးထိရောက်အောင် ကြိုးစားနိုင်ခဲ့တဲ့သူဟာ Hiphop ဂီတပေါ်မှာပါသြဇာလွှမ်းခဲ့ပါတယ်။
Hiphop ဂုရုတွေဖြစ်တဲ့Heavy D, Treach, The Notorious B.I.G. နဲ့ Jay-Z စတဲ့လူတွေနဲ့အတူလှုပ်ရှားမှူတွေလုပ်ပြခဲ့ပါတယ်။
သူ့အကြောင်းကိုတခြားလူတွေစုံစုံလင်လင်ဖော်ပြရေးသားဖော်ထုတ်ကြဦးမယ်လို့မျှော်လင့်လို့ ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရတဲ့XXL မဂ္ဂဇင်းမှ ရှာဖွေတင်ပြထားတဲ့ မိုက်ကယ်လဂျက်ဆင် အကြောင်းလေးကို မျှဝေချင်ပါတယ်။ သူမသေခင်ကတည်းက ဘုရင်တပါးလို ၊ ဂန္တ၀င်တွင်အောင်လုပ်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့လူလို သူ့ကိုတင်စားရွတ်ဆိုခဲ့ကြတဲ့ Rapper တွေရဲ့ စာသားတွေကို XXL မဂ္ဂဇင်း မှ စုစည်းထားတာလေးတွေကို ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ။ ဒါကတော့ သူ့အတွက် အခု ရည်စူးပြီး သီဆိုထားတဲ့သီချင်းအသစ်ပါ။
ဒီနေရာကို နှိပ်ပြီးနားဆင်ပါ ။
“I’m growin’ and glowin’ likeaforest blaze/Do you like Michael Jackson, we like Cool J.”—LL Cool J “Rock The Bells,” Radio
“Pseudo psychos I play like Michael Jackson when I’m bustin ass and breakin backs”— Jeru the Damaja “Come Clean,” The Sun Rises in the East
“So do like Michael Jackson and “Remember the Time” (DO YOU REMEMBER?)/Put on your dancin shoes or somethin cause ya sho’ can’t rhyme”—Phife Dawg “Scenario” Remix, Scenario 12”
“Come and rock with us, all night like Michael Jackson/Leave your guns and knives at home, black, that’s all I’m asking”—Mr Lawnge on Black Sheep’s “Black Sheep,” Non-Phiction
“Raw Nights I perform like Mike anyone Tyson, Jordan, Jackson pack guns action”—The Notorious B.I.G on Puff Daddy’s “Victory,” No Way Out
“Leave you lookin like that Michael Jackson jacket with all them zippers”— 50 Cent “Patiently Waiting,” Get Rich Or Die Tryin
“Black serial killer, man turns to gorilla/Provoked I change faces like Michael Jackson’s Thriller”—Wyclef Jean on The Fugee’s “Ready Of Not” Remix, Bootleg Versions
“This is bad, real bad, Michael Jackson/Now I’m mad, real mad, Joe Jackson” —Kanye, on Keri Hilson’s “Knock You Down”
“Black lights, stamina, uh, uh, uh action!/You been gettin more butterflies than Mike Jackson”—Ludacris on Amerie’s “Why Don’t We Fall In Love” Remix
“Same sword they knight you/they gon’ goodnight you/with, shit, that’s only half if they like you/that ain’t even the half what they might do/don’t believe me, as Michael.” —Jay-Z “Hot 97” Freestyle
“I used to hustle, now all I do is relax and strive/when I was young I wasafan of the Jackson 5″—Nas “Halftime,” Illmatic
“Hippa to the hoppa and you just don’t stoppa/I control Michael Jackson’s Thriller”—Old Dirty Bastard “Rollin With You,” Nigga Please
“And plus I’m bad as Michael Jackson, even though he Dangerous”—Erick Sermon “Erick Sermon,” No Pressure
They jacked the beats, money come wit ease/But son, he couldn’t stop, it’s like he hadadisease/He jacked another and another, Michael Jackson, Stevie Wonder/Set some R&B over the track for ‘Deep Cover’”—Mos Def “Children’s Story” Talib Kweli and Mos Def Are…
“I guess, Michael Jackson was right, “You Are Not Alone”/Rock your hardhat black cause you in the Terrordome”—Mos Def “Mathematics,” Black On Both Sides
“The Mike Jordan of rap, Mike Jackson of pop” — Jay-Z on Michael Jackson’s Rock My World,” Invincible
Ja Rule – “”Off the Wall” like MJ in his early days/It’s the Inc. and Lopez now”—Ja Rule on J-Lo’s “Ain’t It Funny” Remix, J-Lo
“Give my ladies dick, my young hoes pee-pee/Hits inarow like MJ (Hee-hee!)”—Jay-Z “It’s Hot” (Some Like It Hot),” In My Lifetime Vol. 3
“Cops caught me red-handed/Blood On the Dance Floor/or was it Michael Jackson?”—Method Man “Step By Step,” Tical 2000: Judgement Day
“Yo we in the streets where it’s nothin but love/I’m them leather shits, you the Michael Jackson glove”—Sheek Louch “In/Out (S.P.),” Walk With Me
“Leave me alone like Michael Jackson/Or there will be more than butterflies in your stomach, waiting to see what happens”—Talib Kweli “Good To You”—Talib Kweli “Good To You,” Quality
“Now they wanna do ya boy like Mike in his prime/Billie Jean, the goddamn boy ain’t mine”—Jay-Z “American Gangster,” American Gangster
“I’m watchin’ that/like the boxing match/in the ring of Manila/I wanna keep it comin’ like the singles of “Thriller””—Fabolo“Baby,” Real Talk
“Come to Compton see “Thriller” like Mike Jackson/I might be, Spike Lee, of this gun clappin’”—The Game “Westside Story,” The Documentary
“No lights, no camera, but lots of action/No moonwalkin backwards, kid, like Michael Jackson” —Parrish Smith (EPMD) “It’s Going Down,” Business Never Personal
“Walkin withatrenchcoat to part the pumpin’/Like MJ, I wanna be startin somethin’”—Redman “LickaShot,” Malpractice
20th.June,FreeStyle Battle at La Club
မဲခေါင်မြစ်အတွင်းမှ ဧရာဝတီလင်းပိုင်များ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်တော့မည့် အခြေအနေတွင် ရှိကြောင်း WWF သတိပေး